Wada Hadalkii Maamulada Hargeysa Iyo Khaatumo Oo Wajigiisii Labaad Dalka Jabuuti Ka Bilaabmayo+Xubnihii U Matalayey Wada Hadalka Oo La Filayo Inay Hargeysa Ka Dhoofaan. – Xeernews24
Wada hadalkii u bilaabmay Maamulka Soomaliland iyo kan Khaatumo ayaa la filayaa inuu wajigiisii labaad todobaadkan gudahiisa ka bilaabmo dalka Jabuuti.
Waxaana xubnaha Maamulka Soomaliland u matalaya wada hadalkan oo tiradoodu dhan tahay 3 xubnood la filayaa inay maanta ka dhoofaan Hargeysa iyaga oo u dhoofaya dalka Jabuuti,,waxaana xubnahaasi kala yihiin sida naloo sheegay gudoomiyaha xisbiga UCID Eng Faysal Cali Waraabe,wasiirka arrimaha dibada Soomaliland Dr Sacad Cali Shire iyo xubin kale oo kamid ah xukuumadda.
Sidoo kalena Maamulka Khaatumo ayaa waxa iyagu dhankooda ka socda saddex xubnood,waxaana hogaaminaya Madaxweynaha Maamulkaasi Khaatumo Prof Cali Khaliif Galaydh.
Lixdan xubnood ee ka kala socda labada dhinac ayaa wada hadalkoodi ka bilaabmi doonaa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti,iyaga oo halkaasina kaga wada hadli doona arrimo badan oo xasaasi ah isla markaana ay ugu muhiimsan tahay Sidii xal waara looga gaadhi lahaa dagaaladan isdaba jooga ah ee ka dhacaya goobaha lagu sheego gobolada bariga Soomaliland,waxaana loo wada dhag taagayaa natiijada kasoo baxda wada hadalkaasi u dhaxeeya labada maamul ee Soomaliland iyo Khaatumo.
Gabagabadiina wada hadalkan maamulka Somaliland iyo Khaatumo ayaa wajigiisii ugu horeeyey uu ka dhacay magaalada Addis-ababa ee caasimada dalka Itoobiy,waxaana kasoo baxay qodobo kala duwan kuwaas oo ay isla meel dhigeen waftigii ka kala socda labada dhinac,waxaana wajigan labaad la filayaa inay kasoo baxaan qodobo Muhiim ah.
Sida la wada og yahayna Dawladda Djibouti ka sokoow waxaa dalka Djibouti ku nool dad reer Djibouti ah oo asal ahaan ka soo kala jeeda labadaa maamul ee Soomaaliland iyo Khaatumo oo siyaasada Djiboutina ku leh Galaan-gal awood badan wax badana ka furdaamin kara muranka daba dheeraaday.
Muqdisho Xaruuntii lagu qaban lahaa Doorashada Madaxweynaha oo loo badalay muran... Cajiib Gidaar Gaboobay oo 150 sanno iyo in badanba jiray oo hadana la leeyahay...